Ny fampiharana 7 tsara indrindra izay manova ny lokon'ny volo amin'ny fotoana tena izy 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Ny fampiharana izay manova ny lokon'ny volo dia mety hahasoa na amin'ny fahafinaretana na amin'ny famitahana ny namanao na amin'ny fanampiana anao hanapa-kevitra ny loko hoso-doko. Ireo fampiharana ireo dia ahafahanao manandrana mijery endrika vaovao alohan'ny handehananao any amin'ny salon, matetika amin'ny zava-misy. Noho izany, tsy dia atahorana kokoa ny hanenina taty aoriana.
1. Loko volo
Ny loko volo dia manome fomba fandokoana isan-karazany, toy ny triplet, maizina, olon-dehibe na manerana ny volo. Rehefa manokatra ny rindranasa dia miatrika ny sary avy amin'ny fakantsary ny mpampiasa, fa azo atao koa ny mampiasa sary avy amin'ny telefaona finday. Safidio fotsiny ny loko eo ambanin'ny efijery.
Misy safidy sahisahy, toy ny aloky ny maitso, volomparasy, manga ary ny mahazatra indrindra, toy ny blonde, brown and red. Ny fampiharana dia mamela anao hizara ny efijery koa hampitaha ny sary amin'ny fotoana tena izy. Na dia tsy manam-pahaizana aza, kitiho fotsiny ny efijery mba haka sary na hikasihana ary tazomy mba handraisana ilay horonan-tsary.
Lokon'ny volo (maimaim-poana, amin'ny fividianana fampiharana): Android | ios
Jereo hoe ahoana no hijerenao loko volom-bolo vaovao amin'ny fotoana tena izy
Fabby Look dia fampiharana Google fanandramana noforonina manokana hanovana ny lokon'ny volo. Ny fampiharana ny tonony dia mitranga amin'ny fotoana tena izy. Kitiho fotsiny ny lakile ary jereo ny fiovan'ny fotoana. Misy safidy mahazatra, toy ny blonde, red, brown and grey, eny fa na dia ny tsy mahazatra aza, toy ny manga, mavokely, volomboasary, sns.
Raha tianao ny valiny, dia afaka maka sary ianao, ao amin'ny vavam-baravarankely eo afovoan'ny efijery, ary zarao amin'ny Facebook, Instagram, Snapchat mora foana, ankoatry ny hafa. Ny programa dia tsy manana fomban-javatra sarotra, nefa tsy manana adiresy fanamboarana na fanovana.
Fabby mijery (maimaim-poana): Android | ios
Instagram dia tsy fampiharana manokana hanovana ny volon'ny volo, fa manana sivana maromaro ahafahanao mampiditra alokaloka vaovao amin'ny fotoana tena izy. Mba hanaovana izany, mandehana fotsiny amin'ny Stories, manorata ireo bara misy ny vokatra avy eo ankavanana kavia, hatrany amin'ny farany. Dia ho hitanao ny safidy Voka-pikarohana, izay tokony hikasihanao.
Eo amin'ny efijery izay miseho, mankanesa any amin'ilay kisary fanamafisam-peo, eo an-tampon'ny efijery ankavanana. Ao amin'ny sehatry ny fikarohana, mampidira teny toa volo maro loko o lokon'ny volo ary ho hitanao ny safidy sivana maromaro manolotra fiasa.
Milalaova ny dee tianao dia avy eo Miaina. Hoentina eo amin'ny efijery publication Stories ianao, izay ahafahanao maka sary sy handefa horonantsary, toy ny ataonao amin'ny sivana hafa.
The Guide Sivana sy vokany miafina amin'ny tantaran'ny Instagram - jereo ny fomba hahitana manazava amin'ny antsipiriany ny tutorial.
Instagram (maimaim-poana): Android | ios
Simulator taovolo K-POP
Ny Hairfit dia aingam-panahy avy amin'ny volon'ireo mpanakanto amin'ny karazan-kira K-Pop avy any Korea Atsimo. Mamela anao ny fampiharana mijaly sary avy amin'ny Galerie na alao eo an-toerana. Ny mpampiasa dia tsy maintsy misafidy volo aloha ary manohy tincture manova ny pitch.
Misy safidy loko am-polony maro azo, ao anatin'izany ny lamaody toy ny lilac, mavokely, volomparasy ary maitso. Na ny taovolo na ny loko dia azo ahitsy mba ho voajanahary araka izay azo atao.
Taovolo (maimaim-poana): Android
Na eo aza ny fifantohana amin'ny vokatra makiazy, ny YouCam Makeup dia manana endrika mandroso hanovana ny lokon'ny volo amin'ny fotoana tena izy. Afaka manandrana fomba loko roa ny mpampiasa, mifanentana amin'ny alokalony tena izy, na mampiditra alokaloka iray fotsiny.
Azo atao ny manitsy ny hamafiny, ny famirapiratany, ary koa ny fandrakofana ny loko na ohatrinona ny mampifangaro azy amin'ny feony tany am-boalohany. Raha tianao ny valiny, mamela anao tsy haka sary fotsiny ilay rindranasa, fa koa handraisana horonantsary miaraka amin'ny sivana.
YouCam Makeup (maimaim-poana, amin'ny fividianana fampiharana): Android | ios
6. Mandoko volo
Ny loko volo dia mamela anao haka sary eo an-toerana na hampiasa sary misy ao amin'ny Tranomboky. Avy eo, ny mpampiasa dia tsy maintsy misafidy, amin'ny sary, ny faritra misy ny volo ary avy eo hikasika ny feo izay tiany hampiharina. Afaka misafidy loko iray handokoana ny zava-drehetra ianao ary hanampy ny hafa ao anaty kofehy vitsivitsy fotsiny.
Raha tianao, dia azonao atao aza ny mamorona ny lokonao manokana amin'ny alàlan'ny safidy Manampy loko. Ny valiny dia azo tehirizina amin'ny telefaona na zaraina amin'ny rindrambaiko hafa.
Fandokoana volo (maimaim-poana, amin'ny fividianana fampiharana): iOS
7. Mpanova loko volo
Ny Hair Color Changer dia manana tolo-kevitra mitovy amin'ny Hair Color Dye ho an'ny Android. Ny fampiharana dia ahafahanao mampiasa sary avy amin'ny Gallery na maka azy ireo eo no ho eo. Avy eo paompy fotsiny ny loko tadiavina ary apetaho amin'ny faritra misy ny volo amin'ny rantsan-tananao. Azo atao ny mampihatra feo maromaro amin'ny sary iray ary manome loko ny singa hafa amin'ilay sary.
Ary koa, ny mpampiasa dia afaka manova ny hamafin'ny loko, manao izay hahatanteraka ny vokany. Ny fampiharana dia manolotra safidy hizarana ny valiny amin'ny tambajotra sosialy na hitahiry azy amin'ny fitaovana. Mety angatahina ianao hanome azy kintana dimy. Tsy mila manao an'io ianao raha te hahazo ilay loharano.
Mpanova loko volo (maimaim-poana): Android
Ny simulator haircut sy loko tsara indrindra hanovana ny endrika hita
Manova ny maha-lahy na maha-vavy anao ny fampiharana ary mahatonga anao ho lahy na vavy; jereo ny fomba fampiasana
Fampiharana izay hanampy amin'ny makiazy